Obboo Abbaa Duulaafi Obbo Leencoo Lataa duris ammas tokkuma. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObboo Abbaa Duulaafi Obbo Leencoo Lataa duris ammas tokkuma.
Lamaanuu diinota qabsoo Bilisummaa Oromooti. Abbaan Duulaallee qabsoo jaamsee abbaa gamoofi miliyeenerii ta’eera. Obbo Leencoon garuu jibbuma ABOf jecha butuuttuu OPDO jalaa hambaa bu’ataa oola.
Nama guddaaf safuu kennuu wallaaleen miti Qeerrookoo, dhiigakee jigaa jiruufi dalagaa jara kanaa gaafan ilaalu dhiigni sammuutti ol nadanfa.
#OBN International Jettee kan OPDOn Minesota dhaabde kunis #Faaggaadha. Ilbiisotuma akkashee xiinxalaaf affeerti. Heci…#Dhuguma Hinxaqamtu. Oromoon maaliif miidiyaa dhabee laataa?
#Taajjabbiin namicha Alamaayyoo Qannaafi Abdii Fiixee jedhaman kanatti marsaa jira. Yoo ogummaan gaazexeessummaa dhugaan hayyoota ala kanaa hindubbistu taate lamaanshee hurgufeen afa. Moo gooftoliitu biyya keessaa abaluufi abaluun malee hindubbisiinaa jedhanii akeekkachiisa itti kennu laataa?
Ayii Oromoon miidiyaa jabaa dhabe!!
= Tokko taanee
Nu mirgaan galuufii
= Tokkummaan keenyaa
Ergamtuuf galtutu nu miidhaa
= Tokkummaan qeerroo
Diina nurraa qolaa
Ishee nuuf hin taane
Qonnee baafna golaa
Saliha Sami **Waan Baraaa** New Oromo Music 201